Fahatakarana ny SOPA | Martech Zone
Fahatakarana ny SOPA
Alakamisy, Desambra 8, 2011 Alakamisy, Desambra 8, 2011 Douglas Karr
Raha maka fotoana ianao hieritreretana an'io dia ny Internet ihany no ampahany amin'ny toekarena amerikana mandeha tsara ankehitriny. Tsy mino aho fa misy ny mampihomehy fa io ihany koa dia ampahany iray amin'ny toekarena amerikana izay tsy natomboky ny governemanta. Tamin'ny volana lasa, nisy lalàna manan-danja nifidy sy namboarina izay toa hanova azy….
Amin'ny fiheverana fa mila lalàna momba ny zon'ny mpamorona bebe kokoa amin'ny Internet izahay, ny Arovy ny lalàna IP dia novolavolaina tao amin'ny Antenimieran-doholona sy ny Atsaharo ny lalàna momba ny piraty an-tserasera (SOPA) ao an-trano. Izy roa ireo dia tohin'ny fandrahonana ho an'ny volavolan-dalàna momba ny sivana an-tserasera COICA tamin'ny taon-dasa. Tahaka ny teo alohany, ity lalàna ity dia manasa ireo loza mety hitranga amin'ny filaminana amin'ny Internet, mandrahona ny kabary an-tserasera ary manelingelina ny fanavaozana amin'ny Internet.
Fantaro bebe kokoa momba ny SOPA amin'ity Infographic ity, mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasa sy fanavaozana amin'ny Internet izany. Ary indrindra indrindra - mandray andraikitra ary ampahafantaro ny solontenanao fa tsy ho tantinao izany:
Infographic avy amin'ny Fiantohana fiantohana ara-barotra ary hitan'ny namana Jeff Jockisch ao amin'ny Google+!
Tags: EFFfototra sisintany elektronikafahafahanaaterinetoSOPA
Pagelines 2.0 Mamerina amin'ny laoniny ny WordPress Theming sy ny Ecommerce
Vahaolana momba ny automatisation 20 ambony